In this photo taken on Tuesday, May, 3, 2016, Zimbabweans wait in a long line to withdraw cash in Harare. Severe shortages of U.S dollars that are used as local currency have forced many residents into cash hunter-gatherers.
Zimbabwe's government has announced plans to print "bond notes" - a type of cash that people can use for daily transactions. However, many Zimbabweans are wary of the plan, seeing it as an attempt to reintroduce the worthless Zimbabwean dollar.
U.S. dollars have been in short supply in Zimbabwe for months -- a major problem in a country that uses only foreign currency, like dollars, Euros and South African rands.
FILE - A man holds a handful of 5 Billion Zimbabwean dollar notes, in Harare, Friday, June, 12, 2015.